Xog: Xoogagga Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigay gaari sahay u siday ciidanka DF - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xoogagga Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigay gaari sahay u siday...
Xog: Xoogagga Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigay gaari sahay u siday ciidanka DF
Guriceel (Caasimada Online) – Ciidamada Ahlu Sunna ayaa xalay magaalada Guriceel ku qabtay gaari Probox ah, oo casho iyo qaadba u siday Ciidamada Dowladda ee ku sugan deegaanka Good-wiil ee duleedka magaaladaasi.
Arrintan ayaa timid xilli ay xalay aad u kacsaneyd xiisadda magaalada kadib markii la weriyey in ciidamada dowladda iyo Galmudug ay galeen qeybo ka mid ah magaalada Guriceel.
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa gaariga qabtay, xilli uu ku sii jeeday Good-wiil oo 15km dhinaca waqooyi bari kaga toosan Magaalada Guriceel, halkaasoo uu sidoo kale ku sugan yahay Gudoomiyaha Degmada, Faarax Cabdi Macalin.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Xoogaga Ahlu Sunna ay heleen xogta gaarigaasi, waxaana la arkayay xoogagaasi oo gaariga ku eryanaya gudaha magaalada.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Xoogaga Ahlu Sunna ay gaarigaasi iyo hal nin oo la socdayba ay ula dhaqaaqeen goob aan la garanayn.
Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaa weli ka socda dagaal u dhexeeyo ciidamada Galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo xoogaga Ahlu Sunna Waljamaaca, kaas oo geystay khasaare kala duwan.
Dagaalka ayaa haatan lagu soo warramayaa in xoogiisa uu ka socdo xaafadaha ku yaalla dhinaca waqooyi ee magaalada, waxaana xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda ay la wareegeen saldhigga Booliiska Guriceel iyo xarunta maamulka magaaladaasi.
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa 1-dii bishan la wareegay gacan ku haynta Magaalada Guriceel. Guriceel waa xaruntii hore ee Hoggaanka Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe. Soo laabashooda waxay xiisad ka abuurtay Galmudug.